'Unignorable' dia alokaloka Pantone izay tsy azo tsinontsinoavina | Famoronana an-tserasera
Fantatray tsara i Pantone fa io andrim-panjakana natokana ho an'ny loko io ary isan-taona dia mitondra antsika izay ho loko izay ho loharanon'ny aingam-panahy ho an'ny taranja maro samihafa mifandraika amin'ny zavakanto. Miresaka momba ny lamaody, sary, endrika ary maro hafa izahay ...
United Way, ho an'ny fampielezan-keviny vaovao, dia niara-niasa tamin'ny Pantone Color Institute ho mamolavola loko Pantone tokana izay mametraka ny accent amin'ny fanaovana fahantrana hita, tsy fahampiana, herisetra an-tokantrano, fahasalamana ara-tsaina ary fitokanana ara-tsosialy. Ireo olana mifandray akaiky amin'ny tontolo kapitalista iainantsika.
Noho izany dia namorona loko izy ireo niantso ho "Tsy mendrika", toy io feo io izay tsy azo odian-tsy hita. I Laurie Pressman, ny filoha lefitry ny Pantone Color Institute, izay nilaza fa io loko io dia misarika ny sain'ny olona haingana amin'ny famirapiratana miloko mamirapiratra toy ny hafanana sy angovo.
Ary raha miresaka isika fa ny sary famantarana United Way dia noforonin'i Saul Bass tamin'ny androny, mpamorona malaza be laza sy malaza, fantatsika fa be ny ao ambadiky izay azo jerena amin'ny voalohany. Ny hevitra ao ambadiky ny fampielezan-kevitra United Way dia hisarika ny sain'ny olona amin'ny loko fisaka tsy manam-paharoa, izay atambatra amin'ny fitantarana izay "miafina" ary manasongadina ireo olana isan'andro.
Izany koa Malika Favre izay nanatevin-daharana an'ity fampielezan-kevitra ity niaraka tamin'ny andiana fanoharana izay misambotra ireo fikasana hanao olana hita maso na iza na iza mety mifanena amintsika eny an-dalambe ary tsy azontsika lavina mihitsy. Araka ny hitanao, ny sasany amin'izy ireo dia mifampiresaka tokoa ary mampita ireo olana ireo.
Todo voasokitra miaraka amin'io feo 'Tsy mendrika' io. United Way dia miasa miaraka amin'ny marika kanadianina Peace Collective mba hamoronana andian-dahatsoratra 'Tsy mendri-kaja' ho an'izay mividy hanohana ny fampielezan-kevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » 'Unignorable' no loko vaovao novolavolain'i Pantone ary tsy azo odian-tsy hita